कतारमा शून्य लागतमा ‘फ्री भिसा-टिकट सहित् एक कम्पनीले माग्यो नेपाली कामदार, यस्तो छ तलब सुबिधा? – Paluwa Khabar
मंगलबार , अषोज ५, २०७८
कतारमा शून्य लागतमा ‘फ्री भिसा-टिकट सहित् एक कम्पनीले माग्यो नेपाली कामदार, यस्तो छ तलब सुबिधा?
साउन ३, २०७८ आइतबार 93
काठमाडौँ। कतारको एक कम्पनीले शून्य लागतमा नेपाली कामदारको माग गरेको छ । दोहा सहरमा का लागि १५ नेपाली कामदारको माग गरेको हो । योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनु पर्ने छ ।कामदारले तलब खान बस्न सहित करिब ३६ हजार माथि पाउनेछन्
कामदारले हप्तामा ६ दिन र दैनिक ८ घण्टा काम गर्नु पर्ने छ । करार अवधि २ वर्षे रहेको छ । जान चाहने इच्छुक कामदारले भाष तथा घरायसी काम सम्बन्धी एक महिने तालिम अनिवार्य लिने पर्ने छ । खान बस्न सहित तालिम निशुल्क हुने छ ।
इच्छुक कामदारले इन्टरनेसनल मेनपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालिको कार्यालय ग्वार्को ललितपुरमा २०७८ साल बैशाख भित्र अन्तरवार्ता दिनु पर्ने छ । । स्वदेशमा हुने मेडिकलको खर्च, र स्वदेशमा हुने बिमा खर्च, र भिसा स्ट्याम्पीङ शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने छ ।
****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Prevभर्खरै बिमान दु’ र्घटना हुँदा प्रधानमन्त्री सहित ११ जनाको मु’ त्यु , मनमा माया भए RIP लेख्नुहोला
Nextहामी नेपालीका लागि आयो अत्यतै दु’ खद खबर, यी कुराहरूको ख्याल गरी सा’ वधानी अपनाउनु होला
यार्सागुम्बा टिप्नेको सुरक्षामा खट्ने युवाको तलव सुन्दै आश्चर्यचकित
नयाँ मोडालिटीमा फेरि थपियो लक डाउन ! केके खुल्छ केके बन्द? पूरा पढ्नुस…
दया हुनेले फोटोमा छोएर रिप लेखिदिनु होला
कक्षा १२ काे परिक्षा : एक ब्यक्ति एक बेन्च
एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै (398)
शिक्षकले राजनीति गरे जागिरै चट् पार्ने गरि यस्तो बन्यो कानून , पढ्नुहोस कानुन? (265)
मास्टर माइन्ड प्रचण्डलाई देउवाले दिए सरकारको सबै जिम्मा, माओवादीबाट नयाँ राष्ट्रपति को ? (263)
आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, कस्को कति तलब वृद्धि ? (249)
माओवादी केन्द्रमा भुइँचालो , सोह्र सांसद एमालेमा प्रवेश ! नामावली सहित (241)
भर्खरै बिमान दु’ र्घटना हुँदा प्रधानमन्त्री सहित ११ जनाको मु’ त्यु , मनमा माया भए RIP लेख्नुहोला (226)
अब बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, यसरी प्राप्त गर्नुहोस्? (217)
पर्यटनमन्त्रीमा प्रेम आले (215)
१७ दिन हुँदा पनि किन उठेन सीताको शव, अनुसन्धानमा के गर्दैछ प्रहरी
दिउसो बुबाले भेटेर गएको छोरी साझ साथीले हेर्दा…
आज राती १२ बजे देखि लागू हुने गरी NTC ले ल्यायो अहिले सम्मकै सस्तो डाटा अफर !
पतिलाई मार्न ६० हजार रुपैयाँ सुपारी
रोजिनाले मृत्यु हुने अघिल्लो दिन आमालाई फोन गरेर यस्तो सम्म भनेकी रहेछिन…… (भिडियो)
१.	भद्रकालीमा धर्ती माताको आठौ दिनमा यस्तो अनौठो भयो, माता नाग बनेपछि हेरेको हेरै भए सबै(भिडियो) (47)
२.	कञ्चनपुरमा एम्बुलेन्सले ठ’क्कर दिँदा साइकल यात्री ४५ वर्षीय कृष्णबहादुरको मृ’त्यु’ (40)
३.	श्रीमानले फकाएर घर ल्याएको केहि दिनमै २५ बर्षिय गर्भवती रुपाको रहस्यमय मृ’त्यु (39)
४.	दया हुनेले फोटोमा छोएर रिप लेखिदिनु होला (38)
५.	जसलाई आफ्नै भिनाजुले अविवाहित आमा बनाए (36)
६.	भाइरल १२ छोरिका बुवाआमा मिडियामा, अपुत्रो भन्दै समाजले हेला गरेको भनाइ (भिडियो हेर्नुस) (33)
७.	केटा-केटाले धुमधामसंग गरे बिहे, सिन्दुर पोते नै लगाएर भित्राए (भिडियोसहित) (33)
८.	रुपन्देहीमा बुवाआमाले आफ्नै ९ महिनाको शिशुको घाँटी रे टेर ह त्या गरे,घ टना हुनुको पछाडी छ यस्तो कहालीलाग्दो रहस्य (भिडियो हेर्नुस्) (33)